NgoLwesithathu, Septemba 30, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 1, 2020 Douglas Karr
Bengilokhu ngenza lula leli sayithi ukwenza ngcono izikhathi zejubane nokuzama ukwenza imali ngaleli sayithi kangcono ngaphandle kokucasula abafundi bami. Kunezindlela eziningi lapho ngenze khona imali ngesiza… nakhu zisuka kokukhulu kuya kokungenisa kakhulu: Uxhaso oluqondile oluvela ezinkampanini zomlingani. Sisebenza ngamasu ahlanganisiwe afaka yonke into kusuka kuma-webinars kuya kumasheya ezokuxhum ukukhuthaza imicimbi yabo, imikhiqizo, kanye / noma izinsizakalo. Ukumaketha okubambisene kusuka ezinhlakeni eziningi zokusebenzisana. Ngiyahlwaya futhi
NgoLwesine, Septhemba 17, 2020 NgoLwesine, Septhemba 17, 2020 Douglas Karr
Enye yezinto ezinkulu nge-WordPress ukuguquguquka kokwakha ama-shortcode. Ama-shortcode ngokuyisisekelo afaka izintambo ongazifaka kokuqukethwe kwakho okunikeza okuqukethwe okunamandla. Ngisiza iklayenti kuleli sonto lapho lithatha khona omunye wemikhiqizo yalo futhi liyikhiphela kusizinda esisha. Isayithi lingamakhulu amakhasi futhi bekuwumsebenzi omkhulu. Njengoba besisebenza kuhlu lwezinkinga, eyodwa leyo
NgoLwesithathu, Februwari 22, 2012 NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2020 Douglas Karr
Namuhla ekuseni ngibe nekholi enkulu nekhasimende engaba khona mayelana namasu abo wokuthengisa angenayo. Babalule ukuthi bebehlangana nenkampani yokwenza i-webhusayithi yabo. Ngangibonile ngaphambi kocingo ukuthi basebevele bekhona kwi-WordPress futhi ngabuza ukuthi bazoqhubeka yini nokuyisebenzisa. Akasho neze futhi wathi kubi kakhulu ... akukho angakwenza nganoma iyiphi indawo yakhe ayifunayo. Namuhla ukhuluma no